TidyMarketer: Yese-In-Imwe SaaS Kushambadzira Hub Yekushambadzira Campaigns | Martech Zone
Chitatu, September 7, 2016 Douglas Karr
Global media media inopera iri kuwedzera pamwero we5.1%, inotarisirwa kusvika $ 2.1 trillion mu 2019, sekureva kwaMcKinsey. Dhijitari kushambadzira shandisa wakagadzirira ku pfuura TV shandisa muna 2018. TidyMarketer yatanga danidziro yekushambadzira nemushambadziro wezvekuvaka, karenda yemushandirapamwe, mishumo yakazvimiririra uye nezvimwe zvakawanda, zvekushandira pamwe zvikwata zvekushambadzira pamwe nemasangano.
Iyo SaaS chikuva inobvumidza vashambadzi kuronga, kuronga, kubatana, uye kuyera zvese mushandirapamwe manejimendi kubva kune imwechete chikuva. Iyo yakagadzirirwa kubatsira vashambadzi kumhanyisa yakabudirira mishandirapamwe kubva kuemail kushambadzira kune vezvenhau, kuratidza kushambadza, PR, zviitiko uye zvimwe zvakawanda.
TidyMarketer's otomatiki Media Plan Builder, yakatakurwa nezviratidzo zveKPI uye mafomula, inobvumira vashandisi kugadzira uye kugadzirisa matekiniki echirongwa, vachishandisa kugovera bhajeti uye kuzivikanwa kwekuita mushandirapamwe kufanofungidzira mhedzisiro Izvi zvinogona kunge zviri online kutengesa, nharembozha kuisa, zvinotungamira kana zvimwe.
TidyMarketer maficha anosanganisira
Zvirongwa Zvekutengesa - inobvumidza zvikwata kuvaka zvirongwa zvakazara zvekushambadzira, zvakakwana nemaonero akajeka, kusanganisira mhedzisiro inofungidzirwa uye kudyara kwenhau, vakagadzirira kugovana nezvikwata zvemukati kana vatengi vekunze. Zvekushandisa zvishandiso zvinobvisa kudiwa kwemanyorerwo emanyorerwo, uye izvi zvinobatsira makambani kugadzirisa basa ravo, kudzikisa njodzi yekukanganisa kwevanhu uye pakupedzisira kukwirisa mashandiro.
Campaign Calendar - kudhonza uye kudonhedza maficha uye pakarepo ziviso, zvinoreva kuti zvikwata zvinokwanisa kuratidzira mishandirapamwe yakawanda munzvimbo imwe yepakati
Task Manager - inogonesa vashandisi kupa mabasa kunhengo uye kubata vekunze makondirakiti uye vamiririri.
Kwemadhora makumi maviri nemashanu / mwedzi, hunyanzvi hwehunyanzvi hunopa simba SaaS chikuva inoita kuti vashambadzi varonge, kurongedza nekutarisira mishandirapamwe, zvese kuburikidza neyakaumbiridzwa, nyore kushandisa interface. Iyo yakagadzirirwa kubatsira vashambadzi kumhanyisa yakabudirira mishandirapamwe kubva kuemail kushambadzira kune vezvenhau, kuratidza kushambadza, PR, zviitiko uye zvimwe zvakawanda. TidyMarketer zvakare inopa mhinduro agency.
Saina Kuti TidyMarketer
Kuzivisa: Tiri kushandisa yakabatana chinongedzo cheTidyMarketer mune ino chinyorwa
Tags: karenda yemushandirapamwekuronga mushandirapamwemushandirapamwe webasadhijitari kushambadza shandisakuratidza kushambadziraEmail Marketingzviitikochirongwa chekushambadziraprevanhu vezvenhaunetsai